UAbraham Lincoln Ucaphuna Wonke umntu omele azi
Into ethi uLincoln Wathini Ngokwenene: ii-Quotes eziqinisekisiweyo kwi-Context
Iingcaphuno zika-Abraham Lincoln ziye zaba yinxalenye yobomi baseMelika, kwaye ngenxa yezizathu ezifanelekileyo. Ngethuba leminyaka yamava njengommeli wenkundla kunye nesithethi sezopolitiko, iSihlukanisi seTrama sakha i-knack ephawulekayo yokuthetha izinto ngendlela engalibalekiyo.
Ngethuba lakhe, uLincoln wayevame ukucatshulwa ngabantu abathandayo. Kwaye kumaxesha anamhlanje, iincwadana zeLincoln zisoloko zikhankanywe ukubonisa enye ngongoma okanye enye.
Ngokuqhelekileyo ukucaphulwa kweengcaphuno zeLincoln kuya kuba yinto ekhohlisayo.
Imbali yeengcaphuno ezikhohlakeleyo zeLincoln zide, kwaye kubonakala ngathi abantu, ubuncinane ubunkulungwane, baye bazama ukunqoba iingxabano ngokukhankanya into ethiwa yiLincoln.
Nangona i-cascade engapheliyo yeengcaphuno ze-Lincoln ezikhohlisayo, kunokwenzeka ukuqinisekisa ubungqina benani lezinto ezintle uLincoln. Nalu uluhlu lwezinto ezilungileyo kakhulu:
I-Lincoln Iingcaphuno ezilishumi ngamnye kufuneka azi
1. "Indlu ehlukeneyo ngokwazo ayikwazi ukuma. Ndiyakholwa ukuba lo rhulumente akanakukwazi ukunyamezela isigxina sesigxina isigxina."
Umthombo: Intetho kaLincoln kwiNgqungquthela yaseRiphabliki yase-Springfield, e-Illinois ngoJuni 16, 1858. ULincoln wayebaleka kwi-Senate yase-US , kwaye wayebonisa ukungqubana kwayo kunye noSenathente uStephen Douglas , owayehlala evikela isikhungo sobugqila .
2. "Asimele sibe yiintshaba.
Umthombo: Idilesi yokuqala yokuqala kaLincoln , ngoMatshi 4, 1861. Nangona i-slave slave yayisuka kwiNyunyana, uLincoln wabonisa isifiso sokuba iMfazwe yoLuntu ayiyi kuqala. Imfazwe yaphela ngenyanga ezayo.
3. "Ngobubi obungenanto, kunye nothando kubo bonke, ngokunyaniseka okulungileyo, njengoko uThixo asinika ukuba sibone okulungileyo, makhe sizame ukugqiba umsebenzi esikuwo."
Umthombo: Idilesi yesibini yokwakhiwa kweLincoln , eyanikwa ngoMatshi 4, 1865, njengoko iMfazwe Yombango yayiza kuphela. ULincoln wayebhekisela kumsebenzi osondele wokubeka uManyano ndawonye emva kweminyaka emininzi yemfazwe enegazi.
4. "Kungcono ukutshintsha amahashe xa uwela umlambo."
Umthombo: ULincoln wayebhekiselele kwibandla lezopolitiko ngoJuni 9, 1864 ngelixa evakalisa isifiso sakhe sokuqhuba ixesha lesibini . Ingxelo empeleni isekelwe kwintlanzi yexesha, malunga nomntu owela umlambo ihashe yakhe iyancipha kwaye inikwe ihashe elingcono kodwa ithi akusiyo ixesha lokutshintsha amahashe. Iingxelo ezibhekiselele kuLincoln sele zisetyenziswe kaninzi kwiinkqubo zezopolitiko.
5. "Ukuba uMcClellan akayisebenzisi umkhosi, kufuneka ndiwuboleke ixesha elide."
Umthombo: uLincoln wenza le ngxelo ngo-Apreli 9, 1862 ukuveza ukukhungatheka kwakhe nguGenerali George B. McClellan, owayeyalela i-Army yasePomomac kwaye wayololoko ephuza ukuhlasela.
6. "Iminyaka elinesine anesibhozo kunye nesisixhenxe edlulileyo, oobawo bavelise kweli zwekazi isizwe esitsha, bafumana inkululeko, baza bazinikela kwisiphakamiso sokuba bonke abantu badalwe ngokulinganayo."
Umthombo: Ukuvulwa okudumile kweKhowudi yaseGettysburg , eyaboniswa ngoNovemba 19, 1863.
7. "Andiyi kulukhusela lo mntu, ulwa."
Umthombo: Ngokutsho kwepolitiki yasePennsylvania uAlexander McClure, uLincoln uthe oku malunga no- General Ulysses S. Grant emva kweMfazwe yaseShilo entwasahlobo ka-1862. UMcClure wayekhuthaza ukukhipha iGrant kumyalelo, kwaye i-quote yayinguLincoln yokungavumelani kakhulu noMcClure.
8. Into yam ebalulekileyo kule mzabalazo kukugcina iManyano, kwaye ayiyikugcina okanye ukutshabalalisa ubukhoboka. Ukuba ndingayigcina iNyunyana ngaphandle kokukhulula nayiphi na inceku, ndiyakwenza; ukuba ndingayisindisa ngokukhulula bonke namakhoboka, ndiyakwenza; kwaye ukuba ndiyakwenza ngokukhupha abanye kwaye ndishiye abanye ngabanye, ndiyakwenza oko. "
Umthombo: Impendulo yomhleli uHorace Greeley epapashwe kwiphephandaba laseGreek, eNew York Tribune, ngo-Agasti 19, 1862. UGrikeley wayegxeke uLincoln ngokunyuka ngokukhawuleza ekugqibeleni ubugqila. ULincoln wayenxungupha uxinzelelo oluvela eGrithley, nakwabathunywa be- abolitionists , nangona wayesele esebenzayo malunga nokuba yintoni eya kuba yi- Emancipation Proclamation .
9. "Masibe nokholo lokuba ilungelo lenza amandla, kwaye kukholo luthando, masithi, ekugqibeleni, silinde ukwenza umsebenzi wethu njengoko siwuqonda."
Umthombo: Isiphelo senkulumo kaLincoln kwi-Cooper Union kwisixeko saseNew York ngoFebruwari 27, 1860. Intetho yafumana inqaku elibanzi kwiimaphephandaba zaseNew York kwaye kwangoko yenza uLincoln, ongaphandle kwimeko leyo, umviwa othembekileyo wokutyunjwa kweRiphabhulikhi kumongameli kunyaka- 1860 .
10. "Ndiye ndixoshwa ngamaxesha amaninzi ngamadolo ngokuqinisekisiwe okukhulu ukuba andinayo enye indawo eya kuyo. Ubulumko bam kunye neento zonke malunga nam ngathi kwakungenalo olo suku."
Umthombo: Ngokwe-intatheli kunye noLincoln umhlobo uNowa Brooks, uLincoln wathi iingcinezelo zongameli kunye neMfazwe Yomphakathi zamshukumisele ukuba athandaze kwiimeko ezininzi.
UMartin Van Buren: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
Izigqibo zeKentucky naseVirginia
Inkqubo yeMolting ye-Insect Growth